2022-04-23 @ 20:51 in Ankapobeny
Maro ireo hevitra mipongatra ary misy ireo ary fitaovana maneho sy mampiely izay arovany fatratra momba ny taombaovao malagasy. Miezaka ny mieli-patrana amin'ny haino vaky jery izy ireny handifotra ireo manana hevitra sy fijery hafa izay manahirana an-dry zareo ny manohitra azy eo amin'ny lafiny ara-tantara. Iray amin'izay tsy zakan-dry zareo ity mpaneho hevitra iray ity satria zanaky ny efa mpitondra tao amin'ny Trano Koltoraly Malagasy tao. Apetraka etoana mba ho mora tadidy sy ho mora karohina rehefa tadiavina. Eris Rabedaoro nasain'i Gascar Fenosoa avy ao amin'ny Real TV.